I-Seaside Lodge ****indawo yokupaka yangasese - I-Airbnb
I-Seaside Lodge ****indawo yokupaka yangasese
Spiez, Bern, i-Switzerland
Njengoba izingele endaweni emise okwesicathulo sehhashi eLake Thun, enenqaba engomakhelwane yenkathi ephakathi ephakeme ngaphezu kwezivini ze-emerald, i-Seaside Lodge yakhelwe maphakathi netheku okungenzeka ukuthi lihle kakhulu eYurophu, enhliziyweni yeBernese Oberland. Amafulethi asesitayeleni anikezela ngakho konke okufunwa ngabahambi bekhefu elifushane. Amafulethi abonakala ngamakamelo amahle, agcwele ukukhanya, iphansi le-oki le-parquet, amafasitela afika phansi, kanye nezinto ezibonakalayo ezinhle.
Amafulethi asesitayeleni anikezela ngakho konke okufunwa ngabahambi bekhefu elifushane. Amafulethi abonakala ngamakamelo amahle, agcwele ukukhanya, iphansi le-oki le-parquet, amafasitela afika phansi, kanye nezinto ezibonakalayo ezinhle. Inamagumbi okulala amabili ezitezi ezihlukene, i-Seaside Lodge inikeza ubumfihlo obuningi. Amakamelo okulala anombhede olingana nenkosi ohuqwe ngamalineni ekhwalithi kanye negumbi lokugezela elilodwa elineshawa yemvula. Igumbi lokuphumula linendawo yomlilo, osofa abathokomele, itafula lokudlela lamapulangwe labantu abayisithupha kanye nekhishi elihlome ngokuphelele elinemishini yesimanjemanje. Itshe eliyigugu langempela lapha kuvulandi onombono omangalisayo wezintaba, ichibi, isivini kanye nechweba elidumile emhlabeni wonke laseSpiez. Uzokwazisa ukuba yedwa nokuthula kwe-Seaside Apartments, enhliziyweni yetheku okungenzeka ukuthi lihle kakhulu eYurophu.
ubusuku obungu-7 e- Spiez
4.80 · 164 okushiwo abanye
I-Spiez iyindawo ekahle yokuqala yokuthola nokuhlola i-Bernese Oberland ebabazekayo kanye ne-Switzerland yonkana. Imizuzu engama-30 ukusuka enhlokodolobha i-BERNE noma imizuzu engama-20 ukusuka e-Interlaken, indawo yokuqala yohambo oluya eJungfraujoch - Phezulu kweYurophu. Indawo yayo emaphakathi nesiteshi sesitimela esihlangana nedolobha kanye nokufinyelela kwezimoto kuyenza ifinyeleleke kalula futhi ngokushesha kuzo zonke izinhlangothi.
Sihlala eduze, ungasithinta nge-AirBnB App noma inombolo yocingo enikezwe efulethini.
Hlola ezinye izinketho ezise- Spiez namaphethelo